.iso — MYSTERY ZILLION
November 2009 edited November 2009 in Other
iso ဖိုင်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီး CD လုပ်ရမလဲဆိုတာရှင်းပြပေးပါ
ပြီးတော့ဘယ် software ကိုသုံးရမလဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါလား
ရှာတွေ့ထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ ..... ဒီဆိုက် ကပါ ....
A copy of Nero
First, fire up NERO and select "Burn Image" from the "File" menu:
Notice where the type of file is now ".nrg":
Click on the drop down box and select "All Files":
You will getathe following dialog box. *DO NOT* change anything unless you know what you are doing. Just click on OK:
From here it's just like any other CD. Click on "Burn":
Select your CD Writer:
The Burn window will come up. When your CD Writer ejects the disc you are done.
Post တစ်ခုမှာ ပုံ ၅ ပုံထက်ပိုတင်မရလို့2Post ခွဲပြီးတင်လိုက်တာပါ။
အဆင်မပြေရင် မူရင်းဆိုက် မှာလဲသွားကြည့်နိုင်ကြောင်းပါ .....
အကိုပြောချင်တာ က iso file ကို CD Burn ဖို့အတွက်လားမသိဘူး။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ISO Burner ဆိုတာ ရှိပါ့ဗျာ။
Windows Live CD တစ်ခုကို iso ကနေ CD ဖြစ်အောင် ဘန်းချင်တယ်ဆိုရင်ရော တူတူပဲလားဗျ.... နောက်ပြီး ရိုးရိုး Windows CD ကို iso ကနေ Boot CD ဖြစ်အောင်ခုတ်ရင်လည်း တူတူပဲလား....
ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ် ခင်ဗျာ အတူတူပါပဲ။ဆော့၀ဲ ကိုစမ်းသုံးကြည့်ပါ။ interface က ရိုးရိုးလေးပါ အစ်ကို။အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် လဲ ဒီလင့်မှာ သွားလေ့လာနိုင်ပါတယ်
July 11 Registered Users
There are several such tools available on the internet. The best among them is the Recoverit data recovery software. You can use it to recover ISO files on Windows inarelatively short period of time.